Saron-tava fandidiana any Shina Famokarana sy ozinina | Teknolo-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
1. Fitsipika ambaratonga amin'ny fandidiana ara-pitsaboana, lamba mitsoka mitsoka notsofina.
2. Ity vokatra ity dia manana fiarovana telo sosona tsara kokoa sy fahombiazan'ny fiarovana, manakana amin'ny fomba mahomby ny sombin'ny bakteria.
3. Sakano tsara ny fiparitaky ny rà, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny splashes mandritra ny fiasan'ny fanafihana.
4. Ny efijery sivana multi-layer dia afaka manivana ny sosona tsirairay ary mankafy miaina tsara kokoa.
5. Ny sosona telo amin'ny filament tsy misy tenona, sosona voaendaka ary ny lamba tsy voatenona amin'ny hoditra dia mahomby sy azo antoka amin'ny fikarakarana.
6. Fanoherana ambany fofonaina, filtration rivotra avo lenta, aforitra mba hahaforona faritra miaina telo-metatra 360 °, tsy misy sofina.
7. Ny endrika fanovana tarehy dia mety kokoa, ary ny famolavolana tarehy bebe kokoa dia mampitombo ny hatsarana.
8. Ny famolavolana sisin'ny orona plastika tsy hita maso dia tsara tarehy kokoa!
Ity vokatra ity dia voahitsakitsaka amin'ny alàlan'ny etilene oxide ary mety ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny mpiasa mifandraika amin'izany, mitafy toerana any amin'ny hopitaly, sekoly, unit, toeram-pivarotana ary toerana ho an'ny daholobe.
Izy io dia mety amin'ny fiarovana voalohany ny mpiasa ara-pitsaboana na ny mpiasa mifandraika amin'izany, ary koa ny fiarovana amin'ny fielezan'ny rà, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny famafazana mandritra ny fiasan'ny fanafihana. Ny haavon'ny fiarovana dia antonony ary misy ny fiarovana fiarovana ny taovam-pisefoana sasany. Izy io dia matetika ampiasaina amin'ny tontolo madio miaraka amin'ny haavon'ny fahadiovana 100.000 na latsaka, miasa ao amin'ny efitrano fandidiana, ireo marary mitaiza izay tsy manana hery fiarovan'ny vatana ary miasa amin'ny fikolokoloana ny lavaka. Ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana dia afaka manakana ny ankamaroan'ny bakteria sy ny viriosy sasany, manakana ny mpiasan'ny fitsaboana tsy ho voan'ny aretina, ary miaraka amin'izay dia manakana ny famoahana mivantana ireo zavamiaina bitika entin'ny fofonain'ny mpiasa ara-pitsaboana, izay mitera-doza ho an'ireo marary mandalo fandidiana. Ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana dia mitaky fahombiazan'ny filtration mihoatra ny 95% ho an'ny bakteria. Ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana azo araraotina dia tokony havoaka ihany koa amin'ireo marary mifoka rivotra izay mampiahiahy mba hisorohana ny fandrahonana ho an'ny mpiasa hafa amin'ny hopitaly ary hampihena ny risika amin'ny tsimok'aretina.
Malagasy: YY0469-2004 Haavo sivana: 99%
fenitra fiarovana: Saron-tava fandidiana ara-pitsaboana 0469-2011 anaran'ny vokatra: Sarontava fandidiana fitsaboana azo ariana
Previous: Saron-tava an-tsofina
Manaraka: Akanjo miaro